Sidee la isugu dheelitiri karaa diinta iyo danaha shaqada? | Somaliska
Waa su,aal muhiim ah oo wax badan madaxayga ku soo laalaabatay. Waxaan la kulmay dhowr qof oo dhibaato ka haysato isku dheeli tirka diinta iyo danaha shaqada. Waxaan sidoo kale wax ka qoray dhowr qof oo diintooda darteed shaqada looga cayriyay ama ku dhaganaanta diintooda ku waayay shaqo.
Waxaa iigu dambeysay gabadh goob shaqo loo diray oo lagu amray in ay ka shaqeyso karinta hilibka doofaarka iyo iibinta qamriga. Waa arin qofka Muslimka ah ku noqon karta dhibaato kala doorasho ah. Gabadhaas way ka dooday arinta hilibka doofaarka balse waxaa dood ku celiyay dadka ay u shaqeyso oo laftooda wax ka garanaya diinta, hadalkooda waxaa ka mid ah “Islaamku ma mamnuucayo jarjarida ama karinta hilibka doofaarka ee waxa uu mamnuucayaa cunidiisa. ii soo bandhig aayada mamnuucaysa karinta?” qof luuqadii ku liita oo aan diintana wax badan ka garaneyn way ku adagtahay in uu jawaab ka bixiyo dooda nuucaas ah.
Hada ka hor waxaan sidoo kale wax ka qornay wiil Soomaaliyeed oo shaqo loo diiday ka dib markii uu diiday in uu salaamo haweeneydii goobta madaxda ka ahayd. Arintaas waxay dhalisay in maxkamad la isla tagay oo ugu dambeyntii wiilkii Soomaaliga ahaa uu ku guuleystay.
Sidoo kale dhamaadkii sanadkii hore waxaa dhacday in shirkada UPS ee boostada ay shaqada ka cayrisay wiil Muslim ah ka dib markii uu diiday in uu iska jaro garka. Arintaas ayaa sidoo kale waxaa ay gaartay xeer ilaaliya xaga cunsuriyada iyadoo kama dambeystii la ganaaxay shirkada UPS.
Sidoo kale dhibaatooyin badan ayaa ka taagan xaga salaada oo goobo badan oo shaqo ama waxbarasho aysan ogoleen in dadka Muslimiinta ahi ay ku tukadaan goobahaas ama ay tukadaan waqtiyada shaqada ama waxbarashada.
Si kastaba ha ahaatee inta badan waxaa guusha dooda iska leh dadka Muslimiinta ah oo arimo diintooda darteed shaqo loogu diido, laga ceyriyo ama lagu cadaadiyo balse waxaa dhacda mararka qaar in Muslimiintu ay ku doodaan arimo dafiic ah oo aan lagala tashan culumada isla markaana adag in laga dhaadhiciyo dadka aan nagu diinta ahayn. Waxay ila tahay in ay haboonaan lahayd in la helo culumo heegan u ah baraarujinta dadka iyo ka jawaabida su,aalaha muhiimka ah ee la xiriira nolosha wadamada qurbaha. Culumada waa in ay yihiin kuwo si fiican u fahmay nolosha wadamadaan iyo diinta si ay u fahmaan xaalada dhabta ah ee haysata Muslimiinta qurbaha.
Fikradiina ku darsada >>>
asc sxbkeyga jimcaale iyo wallaalaheyga muslimka ahaw arintan hadii aan ka hadlo waa arin jirto in ay ku dabqaan ama ku xiraan rabitaankooda balse taa wey iska cadahey in ay doonayaan iney kaa weeciyaan wadada wanagsan anagoo og in aysan wax diin ah heysan oo ay ku leeyihiin illaah maba naqaan xasbunalaah horta soomaliyeey ogaada wadan nuucaas ah ayad ku noshihiin oo aad cuntaan lacagcanshuur laga soo qaadey laba nin oo isu tegey ama is qaba balse waxa loo baahan yahey in aadan noqonin in aad gooni isu taagto oo hadii aad shaqo hesho oo kale aad asxbta aan diintaada heysan u wacyi geliso ileyn kaama aqli badnee taas waxan ku boorinayaa dadka afkooda si fican u bartey wyyo anigu wax badan kamaaqaan lkn luqada english ayan kaalinteyda kaga qeyb qaataa waxa dhacdey wiil wadankan u dhashey oo aan meel kawada shaqeyneyney in aan u cadeeyey ama aan u faaiideyey qaadashada hadalkaada muhiim uma aha hadane hidaayadu waa qadar hadane chance uma helaayo inuu kugu mashquulo waxan idiinku boorin lahaa in aad u wacyi gelisaan mahadsanidiin
July 13, 2011 at 16:07
asc, waa arin hada maantadan aan la kulmay, goobta aan ka shaqeeyo lagama ogolo in aan ku dukado ama dadka muslimiintu eey ku dukadaan waxaana kala kulmaa culeys, laakiin alle mahadiis waxaan ku adkeystay in aan dukanayo salaada eeyna igu tahay waajib xaqna aan u leeyahay in aan ku dukado waayo waxaa ii fasaxayo shaciga xornimada diinta ee ka jiro wadankan sweden, marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta soomaaliyeedow salaada ha uga tegina shaqada amaa leydinka ceyriyaa iyo wax la mid ah ee ku dadaala oo alle ka baqa.
arintani waa arin mihiima una baahan in aad looga hadlo sideedaba markaad laba shay kala dooranayso waa inaad doorataa ka kuu wanaagsan hadaad tahay qof muslim dhab ah waa inaad doorataa diinta alle samada inooga soo dajiyay waayo taasa wanaagu ku dhan yahay shaqada awlaada xaaska waalidka dhamaan waxa ka horeeya waxa alle ku faray ee uu waajibka kaaga dhigay
qolada kula doodaysa inanta muslimadaa doofarka cunidiisaa xaaraana ee jarjaridiisu maaaha waa ilaahay shay uu xarimay hadana dhinac kale kamuu banayn tusaale ahaan tuuganimadu waa danbi inaad ka iibsato waxa uu soo xaday tuugu adigoo og waa danbi kale waayo adaa ku dhiiri galinaya markaad ka iibsato
markaad shay alle dartii uga tagto alle waxa uu kuugu badalayaa mid ka khayr badan waana aayad quraana dadkani waxay jecelyihiin inay ina duleeyaan oo diinteena bahdilaan uurka ayay ka nacayaan dadka muslimka ah dushana xoriyad ayaa lagaa tusayaa aan uurka jirin balse aan inagu marwalba qaadano ta alle xaqa ku taagnoow muslimyahaw adaa guusha iska lehe
July 15, 2011 at 03:34
a-s aqyaarta dhamaan waa arrin aad u fican maqaalkan, waa jirto qoraal aan aan meel ka aqriyay kaas oo ka hadlayo arrintan mid la mid ah taas oo aheyn in dad somaliyeed meel ay iskugu kenan qolada ceyta bixiso kuwaas dadka suaalo adag weydiyay
1. diinta Islaamka in la shaqeysto ma ogoshay
2. diinta Islaamka ma ogoshahay in qof kale gacanta loo hoorsado(micnaha wax laga sugo)
,,,,, arrintaan oo ah mid dhib badan haddii uusan qofka diinta aqonteeda ay ku yartahay
.dadkii mesha jogay waxay ku jawabeen 1. haa dinta islaamka wey baneysay in la shaqeysto
.2 diinta Islaamka ma baneynin in qofkale wax laga sugo waa inuu qofka shaqeystaa
,,, raggii arintaa watay oo ah qolada ceyta ayey waxay dadka u shegaan in malinta laga bilaabo qofkasta uu ka shaqeyo meesha la geeyo . in ceyta oo la qata ay xaran ku noqoneyso madama ay la mid tahay in gacanta la hoorsanayo oo kale .
Asc salaan ka dib waxaan odhan lahaaa anigu meel kasta oo aad tagtid ama shaqo ka hel ama praktig u tagoo salaadaada ha dayn waayo ilaahay ayaa arkaya adiga iyo iyagaba quluubtaadana la socda markaa waa inaadan u dayn iyagu haday ku yidhaahdaan ha ku tukan halkan waxana fiican inaan ku dhegenaano diinteena iyagana aan u nasteexeno oo aan diinta barno.
Ilaahay khayrka ha ina waafajiyo Salaama calaykum.